DHEGEYSO-Tartanka qandaraaska dhismaha laamiga Garoowe iyo Galkacyo oo ladaahfuray. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Tartanka qandaraaska dhismaha laamiga Garoowe iyo Galkacyo oo ladaahfuray.
Noofember 17, 2016 2:30 b 0
Garoowe, Nov 17 2016–Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa maanta waxaa lagu daahfuray qandaraaska tartan furan oo ay afar shirkadood ee rer Puntland ah u gelayaan dhismaha wada laamiga ah ee u dhexaysa Garoowe iyo Galkacyo.
Barnaamijkaan oo ay hormuud u tahay Hay’ada wadooyinka u qaabilsan dowladda Puntland ee PHA ayaa waxaa goob joog ka ahaa mas’uuliyiin kasocota dowladda Puntland.
Sawirro-Isu-soobaxyo roob-doon ah oo kadhacay Magaalada Boosaaso.